FMMB sy FMBM : hotanterahina indray ny «Global Day Of Prayer» | NewsMada
FMMB sy FMBM : hotanterahina indray ny «Global Day Of Prayer»
Toy ireo firenena roanjato mahery maneran-tany, hanatanteraka ny « Androm-bavaka maneran-tany » na ny “Global Day Of Prayer” isika eto Madagasikara. Fiarahana manandra-bavaka fifonana sy fibebahana, hisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra, hanova ny fiarahamonina, ny andron’ny Pentekosta, izay ny atao hoe “Global Day Of Prayer”. Nanomboka ny taona 2003 no nanatanterahana azy io eto amintsika, tamin’ny alalan’ny Fikambanan’ny mpiara-mamaky Baiboly (Ligue pour la lecture de la Bible) sy ny Fikambanana mampiely Baiboly malagasy (FMBM).
Misy ny dingana arahina amin’ny fanatanterahana ny vavaka, atao hoe « 10 – 1 – 90 ». 10 : folo andro mialoha ny Pentekosta, miray hina manao vavaka mitohy, mandritra ny folo andro ny vondrona kristianina tsirairay (fiangonana, fikambanana, ankohonana…) ao amin’ny sehatra misy azy avy. Ny 5 hatramin’ny 14 mey 2016 no hanaovana izany. 1 : Ny alahadin’ny Pentekosta 15 mey, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro indray, hiaraka hanandratra fiderana sy vavaka, ao amin’ny fiangonana FJKM Isotry Fitiavana ny kristianina rehetra. Ny 90 kosa, midika ho sivifolo androm-pitahiana, hifanampiana sy hifanomezan-tanan’ny kristianina, toy izay nitranga tamin’ny andron’ny fiangonana voalohany.
Eo anoloan’izany, manentana ny kristianina sy ny fikambanana ary ny ankohonana… rehetra ny Fikambanan’ny mpiara-mamaky baiboly sy ny Fikambanana mampiely Baiboly malagasy hiara-miombona amin’ireo fotoana voalaza etsy ambony ireo. Indrindra ao anatin’izao vanim-potoana lazaina hoe manahirana lalovan’ny firenena izao.